Auto Like Instagram - Instagram Auto Like
Auto Like Instagram: Bot Yekuda otomatiki Anofarira
Instagram ikozvino rave chishandiso chakakosha mukusimudzira kwemazuva ano zvigadzirwa uye kukura kwevateereri. Zvisinei, kuenderana neakajairwa ezuva nezuva Instagram zvinyorwa uye kubatanidzwa kunogona kutora nguva uye kunetesa. Uye ngatirege kukanganwa kuti makwikwi anotyisa sei pa Instagram.
Uchishandisa bot kune otomatiki Instagram akada, Zvakafanana nekubhadhara Instagram kuti account yako iratidzike pane zvekudya zvevanhu kuburikidza nekutsigira kushambadzira. Iwo anoshanda otomatiki ezvekuda kuburikidza nebhoti chiitiko chinogadzira mazana emikana yeako Instagram account kuti iwanikwe nevanhu vazhinji.
Sezvo Instagram inovandudzika pakuziva otomatiki kudyidzana uye makambani anovapa iwo, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kuyedza akawanda masevhisi kuti uwane iyo yakakodzera iwe. Asi sezvinei, takakuitira iwe uye heino runyorwa rwedu rweakanakisa 5 Instagram auto senge bots muna 2021:
Inonyanya kushanda autolike bot kusvika nhasi – Instagram Bot Muteveri
Iyo yakasimba kwazvo kushandisa michina ruzivo – Inflact
Zvakanakisa kukosha kwemari – Instaboss
Zvakanakisa mutengi webasa – Instazood
kunyanya yakavimbika – Instamb
Nei Uchishandisa An Auto Kunge Bot?
Kukura yako Instagram account chiitiko chakaomarara nemabasa mazhinji anofinha aakapihwa. Kushandisa bot kugadzirisa maitiro akafanana pa Instagram kuchakubatsira iwe zvakanyanya kuwedzera kubatanidzwa kwako uye kuoneka, uye iwe uchave uine yakawanda nguva yekutarisisa kuendesa mhando yezvinyorwa kune vateereri vako.
Iyo yakanaka auto-senge Instagram bot ichawedzera mukurumbira wako pa Instagram uye wedzera yako yekukura chiyero nekubvumira yako yatove yakanaka account kuti ionekwe nevanhu vazhinji.
Maitiro Ekumisikidza Iyo Auto Kunge Bot?
Kugadzira mota senge Instagram bot, iwe unofanirwa kudoma tarisiro yaunofarira. Unogona kunanga vanhu, hashtags nenzvimbo, uye iyo bot inoshandisa vanyori vavo kufarira zvinyorwa, izvo zvinobva zvaita kuti kubatanidzwazve kuve muchimiro chekuda. uye koshitomu. Semuyenzaniso, kana ukanangisa munhu, iyo autolike bot ichaita otomatiki senge iwo maposi evanonongedzera emunhu anonyorera.
Paunogadzira zvaunofarira pa Instagram, ita shuwa kuti iwe unoronga iyo mota senge bot nenzira kwayo. Kuti uve nechokwadi chekuti unotora mukana wakazara weiyi otomatiki chishandiso pasina kuisa yako Instagram account panjodzi, unofanirwa kusarudza auto yakaita module inopa :
Zvoga kudyidzana kumhanya.
Zvisinei, iwe unofanirwa kuyeuka kuti Instagram automation bots haizokupe iwe zvisingaperi zvekuda, asi zvemukati zvemukati zvichave. Instagram's otomatiki anoda achakuitira, asi mhando yezvako zvemukati iri kwauri.
Iwo akanakisa bots kuita otomatiki kufarira pa Instagram
Kana vachibatwa nehanya, kuda ndiko kubatana kwakachengeteka nevateveri kunogona kuvezwa pa Instagram. Uye kana iwe wagadzirira kuburitsa izvo Instagram zvaunoda, Izvo zvakakosha kuti uzvishongedze neakanakisa Instagram bot yakanyatsogadzirirwa iyi basa.
Saka zvino, inguva yekunyatso tarisa yedu runyorwa rwe5 akanakisa Instagram auto liker bots kuyedza izvozvi.
#1 - Bot de Vateveri Instagram
Mutengo: 76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando,99 EUR pamwedzi
Iyo Instagram Hyper Anotevera Bot ndiyo chishandiso chakanakira avo vanotsvaga kuita Instagram kufarira pane mamwe maakaunzi kusimudzira kudzokedzana kubatanidzwa..
Isu tinosarudza Hyper kune mamwe bots nekuti inogona kuita zvizhinji zvezvinhu zvaunotarisira kubva kune inoshanda Instagram bot. :
Yakabatanidzwa smart kunongedza kune yakanakira mhedzisiro
Iwo asingadhuri otomatiki mhando marobhoti pamusika
Kuchengetedzeka kukuru nemusununguri proxy pane mushandisi maakaunzi
Yakasimba firita sarudzo
Nhamba isingagumi yeakaundi maakaunzi.
#2 - Inflact
Inflact is automation software yakagadzirirwa nevanhu vari kumashure kweIngramer, uye ruzivo rwavo runotaura rwega.
Iyi bot ye Instagram automation ine zvese zvaunoda kuti utange kukura account yako, kubva iko kushandisa otomatiki kwekuda kune chishandiso chekuronga, kuitira kuti yako yese Instagram zano igadziriswe pamberi.
Inflact inopa yakasimba otomatiki ruzivo kune vashandisi vayo neinotevera maficha :
Targeting nema hashtag, nzvimbo nemazita evashandisi
Akangwara ongororo zviridzwa
Inobatsira Instagram zvishandiso
Yekukurumidza kumhanya kuburitsa hunhu chaihwo hwevanhu
Modular yekubhadhara sarudzo.
Mutengo: 11.90 EUR pamwedzi
Instaboss chiFrench automation sevhisi iyo inoti inopa kuwedzera kuoneka uye kuita nekugadzirisa zvavanofarira kuburikidza ne bot yavo. Chii chinoisa iyi kambani kure, kuzvipira kwayo kutsigira mumwe nemumwe wevashandisi vayo mukuwana vanyori vavo vekutanga zviuru.
Iwo makuru maficha eabo otomatiki bot ndeaya :
Yechipiri yakachipa pamusika wemarobhoti erudzi rwemotokari
Zano rakasarudzika rakapihwa nebasa revatengi
Kuremekedza miganho inoiswa ne Instagram
Kusvikira ku20 IG account.
#4 - Instazood
Mutengo: 13 EUR pamwedzi
Instazood ndeimwe yemapiyona eiyo Instagram bot musika uye inozivikanwa nekukurumidza uye kuvimbika kwayo vatengi..
Iwo maficha eiyo Instagram bot ari akapusa uye echinyakare :
Live chat iripo nerutsigiro rwakavimbiswa mukati maawa makumi maviri nemana
Instagram bot yakagadzirirwa kushanda mushe pane ese nhare mbozha
Mafirita uye sarudzo dzekugadzirisa kuti uite zvaunoda.
Chikonzero isu chatinofunga Instamber kuve chakavimbika kwazvo ndechekuti ivo vakaita nhanho huru mukugadzirisa shanduko dzichangoburwa muma algorithms e Instagram..
Huru maficha anowanikwa neiri otomatiki akada robhoti:
Yepamberi yekunongedza sarudzo
Mutariri weAccount kuchengetedza yako otomatiki mukati memiganhu
Zvoga zvimhanyisa zviitiko zvekuita uye kusefa kwepamberi
76% yevanhu vanoti vanonyanya kuvimba nezvakagovaniswa nevanhuwo zvavo pane nemhando
Iyo Yakanakisa Instagram Kukura Chishandiso
Instagram hainditenderi kupinda : Facebook
Ndeapi Akanakisa Instagram Bots muna 2020 uye Maitiro Ekuchengetedza Akaunti Yako Yakachengeteka?
Maitiro Ekubata Vanofurira Pa Instagram
Maitiro ekuwedzera nyaya pa Instagram
Sei Ndirikurasikirwa nevateveri ve Instagram : Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa Instagram
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramZvese nezve iyo Instagram Checkout
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro ekuwana zvimwe zvinodiwa pa Instagram : 15 Mazano uye Akanakisa Mapurogiramu